बोनी: आत्मनिर्भरताको कथा
Samhita Collur मा फ्रेवुअरी 6, 2019 द्वारा लिखित।
आज बोनी अमेरिकामा आफ्नो जीवनको बारेमा विनम्र विश्वासका साथ बोल्छन्। बोनी देशमा बसोबास गरेको पाँच बर्षमा, उसले आफ्नो लागि आर्थिक सुरक्षा निर्माण गरेको छ। उसले अपरिचित परिवेश र वित्तीय प्रणालीलाई बल र सुरक्षाको साथ नेभिगेट गरेको छ।
बोनीको कथा वास्तवमै स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताको कथा हो - आप्रवासी समुदायहरूको ट्रेडमार्क। जब उहाँ आफ्नो यात्रा र हामीसँग अन्तरदृष्टि साझेदारी गर्नुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ:
“यी चीजहरूको बारेमा सोच्न सक्ने ठाउँ पाउँदा राम्रो लाग्छ। मसँग मेरो यात्रामा सोच्ने समय आउँदैन। ”
बोनी मेक्सिकोको पुएब्लाभन्दा बाहिर हुर्किए।
बोनीको परिवार एक आदिवासी एजेटेक पृष्ठभूमिमा सम्बन्धित छ, त्यसैले उनी आफ्नो मातृभाषा बोले नहुआटल, स्पेनिशको सट्टा। उहाँ आफ्नो आमा, बुबा र चार भाइहरूसँग घरमा बस्नुहुन्थ्यो।
उसको परिवार धनी थिएन, र उनीहरूले यो धारणामा विश्वास गरे "तिमीसँग जे छ त्यो तिम्रो हो।"
"मेक्सिकोमा, यदि तपाईं धनी हुनुहुन्न भने, तपाईले loansणलाई एउटा प्वालमा खन्नुहुन्छ जस्तो देखिनुहुन्छ।"
क्रेडिट बोनीको लागि वैदेशिक अवधारणा थियो। बोनीका अनुसार मेक्सिकोमा, क्रेडिट केवल धनी समुदायहरू वा ठूला पैमानेका अपरेशनहरूको साथ व्यवसाय मालिकहरू द्वारा प्रयोग गरिएको थियो। साथै, मेक्सिकोमा धेरै वित्तीय संस्था धेरै विश्वसनीय वा भरोसायोग्य महसुस गरेनन्, त्यसैले बोनीको परिवार सामान्यतया यी संस्थाहरूबाट टाढा रहन्थ्यो। बोनी मेक्सिकोमा बसोबास गर्दा उनले स्थानीय समुदायका सदस्यहरू र स्थानीय बैंकका कर्मचारीहरू बीच दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको बारेमा सुनेका थिए। केही समुदायका सदस्यहरूले बैंकमा बचत खाताहरू खोलेका थिए र आफ्नो आय खातामा जम्मा गरे। केही हप्ता पछि, तिनीहरूको पैसा अब छैन, र शाखा प्रबन्धक मुद्दा सुल्झाउन असक्षम थियो।
२ 27 वर्षको उमेरमा बोनी रोजगारी पाउन र आफ्नो वित्तीय सुरक्षा निर्माण गर्न अमेरिका सरेका थिए।
"तपाईं प्रायः सुन्नुहुन्छ कि यस देशमा अझ धेरै अवसरहरू छन्, त्यसैले तपाईं यहाँ कसरी आउने र आफ्नो जीवनलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर सोच्न थाल्नुहुन्छ।"
अमेरिकामा बोनीले चाँडै महसुस गरे कि क्रेडिट, र वित्तीय मूलधारको हिस्सा भएर सबैका लागि आवश्यक छ। जब उनी पहिलो पटक क्यालिफोर्निया आइपुगे, बोनी मूलभूत कुराहरूमा केन्द्रित थिए। उसले कसरी आफ्नो आय आर्जन गर्न थाल्छ? उ कहाँ बस्थे? उसले कसरी आफ्नो खाना सुरक्षित गर्दछ?
“तपाईं यहाँ आउनुभयो, र तपाईंसँग पैसा छैन, त्यसैले तपाईं सुरुमा क्रेडिटको बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्न। एक दिन अमेरिका आइपुगेकोमा, तपाईं के खाने, बस्ने र लगाउने कुराको चिन्ता गर्नुहुन्छ। ”
उनले आवास र रोजगारी पाए पछि क्रेडिट इतिहासको आवश्यकता बोनीको जीवनमा घस्रिन थाल्यो। आफ्नो कौशल पुन: निर्माणमा सेट गरेपछि बोनीले निर्माणमा सजिलैसँग भेट्टाए। उहाँ एक स्वतन्त्र ठेकेदार हुनुहुन्थ्यो र आफ्ना प्रोजेक्टहरूको दायरा बढ्दै जाने क्रममा उनले उपकरण भाडामा लिने कम्पनीहरूबाट बढी उत्पादनहरू भाडामा लिनुपर्‍यो। तर उपकरण भाँडामा लिनको लागि उसले सकारात्मक क्रेडिट इतिहास देखाउनु पर्‍यो। उनले यस आवश्यकताको बारेमा मात्र थाहा पाए जब उनी उपकरण भाडामा लिने कम्पनीबाट टाढा गए।
बोनीसँग साथीहरूको मद्दत लिने विकल्प थियो त्यसका तर्फबाट उपकरणहरू भाडामा लिन, तर उनी भाँडा प्रक्रियामा स्वामित्व चाहान्थे। ऊ अरूलाई बोझ दिन वा तिनीहरूको तालिकामा समायोजन गर्न चाहँदैनथ्यो। यो उनको buildingण निर्माणमा लगानी गर्ने समय भएको थियो।
बोनी आफ्नो क्रेडिट बनाउन चाहन्थे ताकि उनी आफ्नो स्वतन्त्रता निर्माण गर्न सकून्।
मन्त्रको साथ हुर्कनुभएको छ कि "तिमीसँग जे छ त्यो तिम्रो हो," बोनीलाई सहजै थाहा थियो कि उनी debtण संकलन गरेर creditण लिन चाहँदैनन्।
बोनीको छिमेकमा, किस्तमा घरेलु चीजहरू किन्नु भनेको क्रेडिट बनाउने लोकप्रिय तरिका हो। थुप्रै कम्पनीका प्रतिनिधिहरू समुदायमा घर-घरमा गएर घरका सामानहरू बेच्थे। समुदायका सदस्यहरूले किस्तमा वस्तुहरू किन्न सक्थे, र प्रत्येक महिनाको भुक्तानी क्रेडिट ब्यूरोलाई रिपोर्ट गरिनेछ।
उहाँ केही कारणका लागि यस विधिको बारेमा सचेत हुनुहुन्थ्यो। पहिलो, कम्पनीको किस्त भुक्तानी योजना उच्च ब्याज दरको साथ आयो। दोस्रो, कम्पनीले aroundणको वरपर कुनै वास्तविक शिक्षा प्रदान गरेन, त्यसैले मान्छेहरू अझै पनि अन्धकारमा छोडे कि कसरी क्रेडिट ले काम गर्‍यो भन्ने बारेमा। तेस्रो, बोनी यस्तो मानसिकतामा हुर्किए कि ''तपाईसँग जे छ त्यो तपाईको हो, " उनको सहज ज्ञान itionण मा उनलाई ले byण निर्माण बाट टाढा नेतृत्व।
को एक यात्रा को दौरान मेक्सिको काउन्सुलेट जनरल आफ्नो पहिचान कागजातहरूको लागि सान होसेमा, बोनी १ टीटी T टी कार्यक्रममा एक प्रस्तुतिमा उपस्थित भए। उनी यस कार्यक्रमको बारेमा बढी सिक्न चाहन्थे, त्यसैले उनी एमएएफको वित्तीय शिक्षा कार्यालयले एमएएफको वित्तीय कोच डायना एडमसँग कुरा गर्न वाणिज्य दूतावासमा रोके। सुरुमा बोनी १ टीटी T टी कार्यक्रमको बारेमा सचेत थिए तर उनले धेरै प्रश्नहरू सोध्दा बोनीले यस विचारलाई न्यानो बनाए। उनी विशेष गरी कार्यक्रममा ग्रहणयोग्य भए जब उनले १टीपी T टी र बीच समानताहरू महसुस गरे टण्डस - सामाजिक ndingण अभ्यासको लागि नाम मेक्सिकोमा। अचानक, क्रेडिट निर्माणको विचार यति अपरिचित महसुस गरेन। शून्य ब्याज, क्रेडिट-निर्माण, सानो डलर loanणको साथ, बोनीले आफ्नो क्रेडिट निर्माण गर्न सक्दछन् र avoidणबाट बच्न सक्दछन्।
सन् २०१ 2016 मा सान जोसे र सान फ्रान्सिस्कोको मेक्सिकन वाणिज्य दूतावासमा एमएएफले वित्तीय सशक्तिकरण सेवाहरू प्रस्ताव गर्न शुरू गर्यो। सान जोसेमा, एमएएफको वित्तीय कोच, डायना एडम नेतृत्व लिन्छन् Ventanilla Financiera जो शाब्दिक रूपमा "वित्तीय सशक्तीकरण विन्डो" मा अनुवाद हुन्छ। मा भेन्टानिला, मेक्सिकन नागरिकहरूले अमेरिकामा आफ्नो वित्तीय जीवनको निर्माण सुरु गर्न समर्थन प्राप्त गर्न सक्षम छन् डायनाका लागि विशिष्ट दिन क्रेडिट, बचत, र बजेट जस्ता विषयहरूको विस्तृत श्रृंखलामा मिनी प्रस्तुतीकरणहरू समावेश गर्ने र ग्राहकहरूलाई उनीहरूको नेभिगेट गर्ने बित्तिकै व्यक्तिगत समर्थन प्रदान गर्दछ। वित्तीय जीवन।
जब डायनाले कन्सुलेटमा उनको काम प्रतिबिम्बित गर्दछ, उनी आफ्नो परिवारको बारेमा सोच्दछन्।
“मेरो आमाबुवाहरूले अमेरिका भर्खरै आइपुगेका बेला भेन्टनिला फिनान्सिरा जाने अवसर पाएको भए हुने थियो। तिनीहरूले धेरै पैसा, समय, र ऊर्जा बचत गर्थे। त्यहाँ यति धेरै संसाधनहरू छन् कि कहिलेकाँही हामी हाम्रो दैनिक जीवनको बारेमा जान्दैनौं। यो हामी हाम्रो समुदायको स्थानहरूमा जाने छैन जब हामी ती संसाधनहरू र सेवाहरूको बारेमा सिक्छौं। यो कामको अर्थ भनेको म कसैलाई लक्ष्य राख्न मद्दत गर्दछु र यो जान्छ कि यो तिनीहरूको पहुँचमा छ। यो अब सपना मात्र हो," डायना भन्छिन्।
दुई १ टीटी T टीमा भाग लिइसकेपछि बोनी आफ्नो क्रेडिट इतिहास निर्माण गर्न सक्षम थिए र निर्माण कार्यका लागि भाडा उपकरणहरू।
बोनीले भर्खरै डायनालाई आफ्नो क्रेडिट स्कोरको बारेमा अपडेट गरे: अविश्वसनीय99!! उसले भर्खर आफ्नो पहिलो क्रेडिट कार्डका लागि स्वीकृत भयो। बोनी आफ्नो क्रेडिट स्कोर निर्माण गर्न जारी राख्न चाहन्छ ताकि उसले अन्ततः outण लिन र आफ्नै निर्माण कम्पनी सुरु गर्न सक्दछ। उहाँ एकदम कडा स्वतन्त्र व्यक्ति भएकोले उसलाई अन्ततः आफ्नो मालिक हुन भन्ने विचार मनपर्छ।
हामीले बोनीलाई सोध्यौ कि उनी के सल्लाह दिन चाहान्छन् जसले यस देशमा आफ्नो जीवन निर्माण गर्न सुरु गरिरहेछन्, र यो उनी साझा गर्न चाहन्थेः
“सकेसम्म चाँडो तपाईंको क्रेडिट निर्माण शुरू गर्नुहोस्। प्राय: जसो हामीलाई क्रेडिटको आवश्यकता पर्दैन जबसम्म हामीले क्रेडिट buildingणको महत्त्व बुझ्दैनौं र यसले अझ कठिन बनाउन सक्छ। "
उनी जस्ता सेवाहरूको महत्त्व उल्लेख गर्छन् Ventanilla Financiera मेक्सिकन वाणिज्य दूतावास मा। वाणिज्य दूतावासले भर्खर देश भर्खर आएका मानिसहरुलाई भेट्छ, त्यसैले हालसालै आएका आप्रवासीहरुलाई सुरक्षित र भरपर्दो -ण-निर्माण उत्पादनहरु लाई परिचय गराउने यो ठूलो अवसर हुन सक्छ।
“अमेरिकामा, क्रेडिटले तपाईंलाई यस्तो चीज निर्माण गर्ने क्षमता दिन्छ जुन तपाईंलाई तपाईंको भविष्य निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ, ”बोनी भन्छन्।
सुरुमा बोनी पैसा बचत गर्ने र आफ्नो परिवारसँगै मेक्सिको फर्कने घरको उद्देश्यले संयुक्त राज्य अमेरिका बसाई सरेका थिए। यद्यपि उनले यस देशमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने क्रममा बोनीले यस मिति पछाडि धकेल्छन्। उनी यस देशमा काम गर्न पाउँदा रमाईलो लाग्छ, र उसले केहि छोटो वर्षमा आफ्नो लागि निर्मित स्वतन्त्रताको कदर गर्दछ।